Forum serasera malagasy HAFETSENA TAMIN' MBOLA KELY - Dinika forum.serasera.org
HAFETSENA TAMIN' MBOLA KELY
Fitohizan'ny hafatra : HAFETSENA TAMIN' MBOLA KELY
rijadolly - 19/09/2011 17:50
Nahazo 20ariary roa rehefa mandeha Miangona taloha. Ny iray atao rakitra sekoly alahady, ary ny iray atao gouter. Latsaka tao anaty tatatra ny roapoly iray, ary dia nitomany. Nanontanian' olona hoe :
- fa inona no mampitomany an'se?
- bôôôôôôh ôôô, Latsaka ao anaty tatatrao ao ny RAKITRAKO.
Ahoana koa ny ananare hafa?
hery - 19/09/2011 17:56
entre pà, nanankarena koa nareo raha roapolo anakiroa no natao rakitra an lolll. Sa vao vetivety izany? :-p
Nenah le misisika mikidaona mijery cinema no tena nilay lolll. Tonga de miditra eo alohana olondehibe anakiray fotsiny, de ilay olona olona koa tsy taitra fa tonga de otran'ny hoe tonga dia miaraka... Faly mihitsy rehefa tafiditra ao amin'ny Salle d'oeuvre fa hoe tafiditra indray
rijadolly - 19/09/2011 18:19
Marina tokoa izany tenin'se izany, ny vola azo atao rakitra manjinika tamin'izany fa roapolo ny tao am-tsaina satria izay no misy amin'izao fotoana, raha tokony ho ariary roa sy ariary efatra.hihihihih!Mandeha oazy fotsiny ilay izy.
roapolo anakiroa no natao rakitra
Ohatrany misy tsy azon' se kely ilay izy: Hitan' hery? Tsy rakitra daholo izany ka, fa ny gouter adinon'se, Tsy ilay atao gouter anie no very fa ilay RAKITRA e! Misy lokony samy hafa mantsy ny vola roapolo rakitra sy ny roapoly gouter. Hihihihihihi. Dia ilay RAKITRA no very.
rijadolly - 19/09/2011 18:46
ie, za koa nanao an'io, niampy an'ilay nijery course soavaly teo mahamasina, dia misisika ao ambanin'ilay vavahadibe latéral.
Tanny - 20/10/2011 16:20
Oay o!zay koa mba nanao anzany an!dia misy an'ilay hoe rehefa misy artista mandalo koa dia mody mitanitanina eo sady manontany hoe ny ankizy koa ve mandoha vola?sady mitady fika ihany!efa tafiditra izahay zay vao gaga ilay olona mpitanty vola!dia miteny hoe nareo an!!!!!!